ဝက်တွေနဲ့အတူနေချင်သူတဲ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၀က်တွေနဲ့အတူနေချင်သူတဲ့…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Dec 9, 2011 in Copy/Paste, Gossip, Rumor, Society & Lifestyle | 24 comments
ယနေ့ခေတ်ကာလ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ပြရင် လူတွေစိတ်ဝင်စားပြီး လူထင်ကြီးမူကိုခံယူချင်ကြတာပဲလား…(ဒါမှမဟုတ်)စိတ်ကူးအသစ်တွေကိုဖန်တီးနေကြတာလားဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်ဝေခွဲလို့မရနိုင်တော့ပါ…
အဖြစ်ကဒီလိုပါ….ဒီနေ့မနက် နံနက်စာစားရင်း လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေအားကစားဂျာနယ် Vol-2,No.122 (9.12.11)မှာပါလာတဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုပါ၊
ကိုရီးယားသူလေး မီရူကင်မ်ဟာညစ်ပတ်တာ သိပ်ရွံတတ်တဲ့သူပါ၊ဒါပေမယ့်သူမရဲ့စိတ်ကူးတွေက တလွဲကို ရောက်သွားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်၊သူမဟာ အမေရိကန် နယူးယောက်မြို့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာ ဆေးပညာသင်ကြားနေတဲ့ ဆေးကျောင်းသူတစ်ဦးပါ၊ကင်မ် ဟာဝက်ထီးနဲ့ဝက်မနှစ်ကောင်နေတဲ့ ညစ်ပတ်နံစော်လှတဲ့ ၀က်ခြံမှန်လုံခန်းထဲမှာ အ၀တ်အစားမပါပဲ နာရီပေါင်း(၁၀၄)ကြာအောင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်၊စားချိန်ရော၊အိပ်ချိန်ပါ အဲဒီဝက်ခြံထဲမှာပါနေထိုင်စားသောက်ခဲ့ပါတယ်၊သူမကတော့ သူဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ သူ့အတွက်တကယ့် ဟဲဗီးမက်ပါပဲတဲ့၊ကျွန်မဟာ ၀က်တွေကိုချစ်ပါတယ်၊ကျွန်မကိုလည်း ၀က်တွေက ချစ်ကြမှာပါလို့ဆိုပါတယ်၊သူမရဲ့ အပြုအမူတွေကို လာရောက်ကြည့်ရူသူတွေက လက်ခုတ်ကြီးပြီးအားပေးကြပါတယ်တဲ့။
လူတွေ ဝိုင်းပြီးလက်ခုပ်မတီးခင် ကောင်မလေးက သူ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အဝှာလေးကို အုပ်ထားတယ်.. ပရိသတ်ကြီးက လက်ခုပ်တီးအားပေးရင်း “မင်းကို ငါတို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ လက်ခုပ်တီးပေးတာပါ မင်းလည်း လက်ခုပ်ပြန်တီးပါ” ဆိုတော့ ကောင်မလေးလည်း ဝမ်းသာအားရ လက်ခုပ်တီးပါလေရော ဒါနဲ့ စကားမစပ်(အတင်းစပ်လိုက်ပြီ) ကိုဇော်မင်းကြီး တင်လိုက်တဲ့ ပို့ စ်တိုင်းက လန်နေ ပျံနေတဲ့ ဟာတွေချည်းဘဲ.. ဒီလူကြီး ဧကန္တတော့ ဧကန္တဘဲ..ဟီး ဟီး
ပြန်လည် တမ်းတ ၀က်ဘ၀ လုပ်နေတာ နေမှာပေါ့.. ၀က်နဲ့ တူတူ နေတာ အထူးအဆန်း ဆိုပြီး လူစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ချင်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ပေတူးနေတာပဲ… အဲဒီလို နေရတာ ပျော်တယ် ထင်တယ်။
၀က်တွေလိုပဲ ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကပ်ပြီး မန်မန်ချားလားမသိဘူးနော်။
အိမ်မှာ..တားတား မွေးချင်ရို့ ပေးပါလားဂျာ
အဲဒိလိုဆိုတော့လည်း ၀က်ဖြစ်ရတာက ခပ်ကောင်းကောင်း…။
Master of Fine Arts ကို Painting
နဲ့ ရထားတဲ့ Artist တယောက်ဗျ…. ဆေးကျောင်းသူမဟုတ်တာသေချာတယ်
Columbia University တက်ခဲ့တာတော့ ဟုတ်တယ် ဗျ MFA ကိုတော့ Pratt ကရတာ …
သူက ဒါ့ပုံလည်း ရိုက်တယ်ဗျ …Nude တွေပဲ …..Nude + Urban တွေ …
သည်ပုံတွေက မှတ်တမ်းပုံတွေမို့ ကြည့်မကောင်းတာ …
တကယ် သူ့art works က composition တွေ မိုက်တယ်…
ဒါ့ပုံသမားချင်းချင်း ကူညီဗျာ့ဇေ ကူညီဗာ့ဇေဗျ….
ကိုငြိမ်ချမ်းထင်သလိုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ…အားကစားဂျာနယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ သတင်းကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးတာပါ..ဒါလည်း ဒီရွာသူကြီးရဲ့ သင်ကြားပြသမူကြောင့် မူရင်းဆို့စ်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီး ဖေါက်ချလိုက်တာပါ။
ဆူးရေ…မူရင်းလိုခင့်က ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောင် ဗာမာတွေလည်းအတုခိုးပြီး လူထင်ကြီးအောင်လိုက်လုပ်ကုန်မှာစိုးရတယ်။
သူကြီးတို့ အမေရိကားမှာ လုပ်လိုက်ရင်အဆန်းတွေကြီးပါပဲ….ကိုကြောင်ရေ…ရှိသေးရင်သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး..
စိတ်ဝင်စားတဲ့ ရွာသူားတွေအတွက် ….
ဝက်ထီးနေရာဘဲ ခဏဝင်လိုက်ချင်စမ်းပါဘိ ။
ဝက်မယား ကို အသာထားလို့ 
လူမယား ကို ဒန်တန်တန် တိန်…
ဂီဂီတို့ အရှေ့ကျွန်းက ဒါပုံဆြာတွေကို ကြောက်လို့မလာတော့ဘူးတဲ့…
မောင်ပေရေ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ဆရာတော်ဆန်နီနေမင်းက ဟောထားသေးတယ်လေ…သိတိထားပါ ကံသုံးပါးမှာ မနောကံက အပြစ်အကြီးဆုံးပါပဲတဲ့…ကဲ အဲဒီမှန်ရှေ့သွားထိုင်ပြီး…၀က်က၀က်ခန္ဒာ၊လူကလူခန္ဒာ ဆိုပြီးရူမှတ်ကြည့်စမ်း…
မဝေေ၀လိုပဲကျနော်ထင်တယ်…သူ့ရဲ့ ပါဖေါမန့် လူကြည့်ခံချင်လို့ပဲ…ဒါကြောင့်မှန်ခန်းထဲမှာ နေပြတာပေါ့နော်…
ဆြာ ကိုဇော်မင်းရေ့ … ကျနော်နောက်ပြီးမန့်လိုက်တာဗျ ….
တကယ်က ကျနော် အဲ့လို artist မျိုးကို တကယ်ရိုက်ဖူးချင်တာ..
သူ့နာမည်နဲ့ Google လုပ်ကြည့်စမ်းပါဗျာ …တကယ်ပြောင်မြောက်တဲ့
ပညာရှင်ပါ. … ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ထားတာလား … အဲ့ဒါကို တမျိုးမမြင်စေချင်ဘူးဗျာ
a form of art လို့ပဲ နားလည်ပေးထားပါ … ကျနော်လည်း နားလည်သလောက်ရှင်းပါ့မယ်ဗျာ
သူက ကမ္ဘာက လက်ခံတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်ဗျ…. ပါရီအစ လန်ဒန်အလယ် ပီရူးအဆုံး
လိမ့်ထားတာ … သူ့ ဆင်မီနာ စောစောက ကြည့်လိုက်ရတယ် …သူ့ဒါ့ပုံတွေ art works တွေတွေ့တယ်
ချွတ်ထားတာနဲ့ ဖော်ထားတာ တပိုင်းစီနော ……ရသ ကွာတယ်…အရည်အသွေးကွာတယ်ပေါ့ဗျာ..
သူက ချွတ်ထားတာ …. ဘာကိုမှ အစွဲမထားဘူး … ဖုံးကွယ်မထားဘူး အရှိတရား ဆိုတဲ့ message
တွေပေးနေတာဗျ . …. သူ့ art form တွေကြည့်ရင် သိလိမ့်မယ် သည်ထဲပါတာကတော့ သတင်း
ဓါတ်ပုံ သက်သက်ပဲမို့ ပြောရတာပါ …..
သည်တော့ သူဘယ်တွေ သွားပြီး ဘာတွေရိုက်ခဲ့သလဲပြောမှ သင့်လျော်မယ်ထင်ရဲ့ ….၁၈၀၀ပြည့်နှစ်လောက်က
တူးတဲ့ tunnel တွေဆီသွားတယ် …. new york မြို့ ရေးဆိုး ထိန်းသိမ်းတဲ့ tunnel တွေသွားတယ်
မြေအောက်ရထားတွေလို နေရာမျိုးတွေကနေ စွန့်လာတဲ့မိုးရေ ဘာညာ ကို ပင်လယ်ထဲပို့တဲ့ နေရာတွေ
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်က ဗုံးခိုကျင်းတွေ …မြေအောက်တူးမြောင်းတွေ ……
သူပြချင်တာက လူတွေ မသိချင်လို့(စစ်ဆို ရေတောင်စစ်မသောက်တော့ပါဘူး) ဆိုတာတွေ
စစ်တုန်းက ဘာဖြစ်ခဲ့မှန်းမသိခဲ့တဲ့ စစ်ကို ကြောက်ရမှန်းမ သိတဲ့ ..နားမလည်တဲ့(ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ပါဝါသာရင်
ချပလိုက်ပါလား ဆိုတဲ့ ခေတ်သစ်-ဖက်ဆစ် ချာတိတ်တွေအတွက်…)
နောက် သမိုင်းပညာရှင်တွေအတွက် …
နောက်ပြီး …သက်ဆိုင်ရာမြို့တွေက စည်ပင်သာယာတွေအတွက် ..(သည်အမျိုးသမီးက သမိုင်းလည်း
အတော်လေ့လာထားတယ် ဗျ ….ဘယ်တုန်းကဆောက်ခဲ့တဲ့ဘာကြီး …ကျမသွားတော့ ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာမျိုး)
မြေအောက်တို့ လူတွေ စိတ်မ၀င်စားမယ့် မမြင်အောင်ဖုံးထားမယ့် နေရာမျိုးတွေမှာ လူ့ခန္ဒာကိုယ်က
မမြင်သင့်ဘူးဖုံးသင့်တယ် ဆိုတဲ့အရာတွေကို ဖော်ပြရင်း … သရော်ထားတယ်. ..မြင်အောင် ခန္ဒာကို သုံးပြီး
ပြတဲ့ artist လို့ကျနော်မြင်တယ်ဗျ …ယဉ်ကျေးမှု မျက်မှန်တပ်ကြည့်ရင်တော့ မတော်တေ၇ာ်ပေါ့ဗျာ …..
PS. မေ့လို့ ..အနီကတ်ပြရင် မီးဒုတ်ပဲနော် …ဟွန့်………….၀ှား….
မျက်လုံးထဲ စိုင်လို့ပဲထင်နေတာ.ဆြာဂီမန့်ထားတာတွေ့မှပဲ ဂလိုမှန်းသိတော့တယ်
သိပါဘူး ဆြာဂီရာ အဆန်းထွင်ထားတယ်မှတ်တာဂျ ……..
တော်ကြာ သဘာဝအတိုင်းနေကြမယ် ဆိုပြီး
ဂျာမန်လူမျိုးတွေကတော့ အဲဒီသဘာဝအတိုင်းနေတာကို သဘောကျကြတယ်…အဲဒီ အနုပညာလည်း မြန်မာပြည်ထဲကို စိမ့်ဝင်လာအုံးမှာ အေကန်မလွဲပါပဲလေ…
မြန်မာတွေ(မိန်းမဖြစ်ဖြစ်..ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်) အဲဒီလို အလုပ်တွေလုပ်စေချင်တယ်..။
ကွန်ဆာဗေးတစ်..အစွန်းနင်းထားတဲ့ ဓလေ့တိုင်းပြည်မျိုး.. ပိုလုပ်ပြသင့်တယ်..။
သူတပါးကြွေးမွေးတာကို.. မလိုအပ်ပဲ.. မှာယူစားသောက်ပြီး အိပ်ထဲထည့်သွားတာက ရှက်စရာလား..။
ကိုယ်ကြွေးတာကို.. မလိုအပ်ပဲ ပိုသုံးတာ.. မပြောဝံ့အားနာတာက ရှက်စရာလား..။
…ထောက်လှမ်းရေး အလုပ်ခံရတာကို.. အော်မပြောရဲတာက ရှက်စရာလား…။
“ရှက်စရာကြီးဆိုတာ.. ဘာလဲ..ဘယ်လဲ” သိသွားကြစေချင်တာပါ….
ကင်မရာမန်င်းတွေ.. ကြေးစားမိန်းမတွေကို.. လက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့.. မထိပဲ.. အဲလိုမိုဒယ်လုပ်ခိုင်းကြပါလားဟင်င်င်….။
သဂျီး က တယ်ပညာစမ်းသကိုး ..
ဒါနဲ့ …လက်ဖျားနဲ့ မတို့ဘဲ ဆိုတာကတော့ နည်းနည်း ဖောင်းသွားဘီ……
သိပြီး ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် ..မေ့နေတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် မကြားဖူးသေးဘူး
ဆိုရင်လည်း မှတ်ပါ သဂျီး ….ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးသော Portrait shooters တွေက
ပလေးဘွိုင်းမှာ ရိုက်တယ်…. landscapers ကတော့ National Geographic ပေါ့
နေရှင်နယ် ဂျီအို ဂရပ်ဖစ်မှာ ဖော်ပြခံရတဲ့ မြန်မာ ဒါ့ပုံဆြာတွေရှိတယ်ဆို အံ့သြမလားသဂျီး..??
ဒါမျိုးလား …..ဟင်းဟင်း …..ရှိတယ်ဗျ ရှိတယ်….ကျုပ်တို့လူမျိုးဒွေ လုပ်ထားတာ …
(သဂျီးကတော့ Existentialism ဘက်ကလှည့်တူးဆွမယ်များ ကြံထားသလားမသိဘူး ..)
ဘယ်မှာလဲတော့ အဲ့ ဆြာသမားကို ခွင့်မတောင်းရသေးတော့ မပြောတော့ပါဘူး..
ခွင့်တောင်းပြီးရင်တော့ ရွာမှာ ခေါ်ဖီ ဖေ့စ် လာတင်လှည့်မယ်….
သဂျီးက ၁နေ့ ၂ပုဒ်ဆိုပေမယ့် ဘက်ဒိတ်နဲ့လည်း တင်လို့ရအောင် စီမံပေးထားတော့..
သဂျီးက ဗမာ ကင်မလာမန်းများ ကို တယ် အထင်သေးသပေါ့ …….
ဒါ့ပုံ ၁ပုံ ကိုတောင် အစိမ်း ၁ထောင် တောင်းနိုင်တဲ့ ဆြာတွေရှိတယ်ခည…
အဲ့ဆြာသမားတွေ ပညာဒါနလည်း ပြည့်ဝကြသဗျ….
ကျုပ်လို ပေစုတ်စုတ် ကောင်တောင် ….ကင်မလာဝယ် တောရိုက်တောင်ရိုက်ရိုက်
သင်တန်းဆိုတာလည်း မရှိ .သင်ပေးမယ့်လူလည်းမရှိ ..သည်ကြားကနေ
၁ကောင်တည်းနေပြီး စာလျောက်ဖတ်…ရင်း …သူရို့ဆြာတင်ပီးမေး
အဲ့သည့် ဆြာတွေ ပြောတာ ခိုင်းတာ ..know-how လေးတွေ
ညွှန်းတာတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်ရင်း ရိုက်တတ်လာတာသာကြည့်တော့….
ဂနေ့ကစလို့ ဗမာ ကင်မလာမန်း များဘက်ကနေ၍
ဖားသက်ပြင်းတယောက် မားကတ်တင်း လုပ်အံ့…….
စာကြွင်း/ ကျုပ်ဆြာသမားတွေပုံတင်ရင် ..စားပွဲပေါ်မေးထောက်ကြည့်ပါသဂျီး..
အံ့သြလွန်း ၍ မေးရိုးကြမ်းပြင် ရိုက်သွားရင် ဆေးဖိုးဝါးခ တာဝန်မယူပါ ….. ခိုင်ဇာ ကိုသာပြေးပါ
ကဲမေးပြီ၊ ရွာထဲက ကမလာမန်း များဖြေကြပါ။
ကိုဇော်မင်းရေ… ကျုပ်တို့ ရွာသဂျီးက သိပ်လစ်ဘရယ်ကျတာ၊ မောင်မောင်ဂီပြောသလိုပဲ အစွဲ ကင်းပုံလည်းရတယ်။ ကိုယ်ရီးယားမလေးလို သူကိုယ်လုံးတီးသဂျီးဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူစပွန်ဆာပေးကြမလဲ။ ကြောင်ကြီးကတော့ ရဲခေါ်ဖမ်းခိုင်းဖို့ တာဝန်ယူတယ်။။။။
၀က်ဘ၀ကလာတော့ ၀က်တွေနဲ့ အတူနေချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ…
သူတို့ ဆီက လူတွေက လည်း နာ မည် တော် တော် ကြီးချင်ကြတာ လည်းပါပါတယ် အထူးအဆန်းတွေလျှောက်လုပ်နေကြတယ်
ယောင်္ကျားလေးတွေ အတွက်တော့ ရသလေးတခု ပေါ့
ဒါဆို သူမက ဆေးကျောင်းသူဆိုတော့ ဂေါက်သွားတာများလားဟင်….